Tokony hividy rindrankajy DoFollow ve aho, sa azoko atao ny manangana azy ireo irery?
Eny, azonao atao ny mividy backlinks DoFollow ho an'ny blôginao. Amin'izany fotoana izany, dia mety hanangana azy ireo irery ianao. Azoko atao ny miasa tsara kokoa amin'ny fikarakarana azy ireny ho an'ny tranokalanao na blôginao, fa tsy hividianana backlinks DoFollow ihany. Raha ny tena izy, raha tsy manana mombamomba ny backlinks kalitao, dia tsy mihoatra noho ny asa sarotra iray hametrahana ny blôginao izany na mety ho fongana ny votoatin'ny pejy ao amin'ny tranonkala ao anaty motera fikarohana. Tsy ilaina ny milaza fa raha vaovao amin'ny SEO ianao dia mila mividy DoFollow backlinks na mitohy manohy ny famoronana rohy. Mba hahazoana izany tolona izany, manolotra fanamarinana aho amin'ny loharanom-baovao sasany tsy misy traikefa mba hanomezanao ny tranokalan'ny orinasa lehibe na blôginao fohy mahazatra momba ny fambolena azoko hanaovana DoFollow hanomboka.
Amin'ny ankapobeny, ny backlinks momba ny kalitao miaraka amin'ny DoFollow dia afaka manampy anao amin'ny fampitomboana ny fikarohana ny tranonkalan'ny fikarohana, manatsara ny fahefanao ary ny laharana Alexa (ho an'ireo izay liana amin'ny fananan'olona manokana) , fanamafisana ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala, ary koa ny AdSense CPC (vidin'ny klioba). Raha ny marina, ny teny feno dia misy teny hafa indraindray mamoaka famaritana amin'ny backlinks - ny rohy mankany anaty (inlink), ny fitenenana, ny "recommandation" na ny mari-pamantarana mavesa-danja nomena an'i Google momba ny lanjan'ny tranonkala amin'ny ankapobeny, ka mahatonga azy io ho mendrika ny hampiroborobo azy eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana. Satria ireo tranonkala manana backlinks maro ireo dia mety ho sarobidy kokoa amin'ny mpikaroka velona mavitrika, ary koa tsy maintsy miarahaba azy kokoa amin'ny fampidiran-dàlana haingana amin'ny boot crawling search.
Noho izany, avelao hiverina amin'ny teboka farany isika - raha nanapa-kevitra ny tsy hividy rindrankajy DoFollow isika ary mahandro sakafo mahatalanjona tena tsara. Ahoana? Mazava ho azy, ny fahazoana backlinks organ-organic dia tsy asa mora akory fa raha ny marina, ny asa dia mety ho lasa mofomamy ho anao - raha fantatrao fa ny tady. Izany no mahatonga ahy etsy ambany hampiseho aminao ireo karazana tricks mba ahafahanao manamboatra pejin-pototra miendrika DoFollow tsy misy vidiny amin'izany! Ireto manaraka ireto:
Mialoha ny zavatra hafa dia manoro hevitra aho ny hitsidika ny BlogAdda - izay ilainao ao dia manoratra ny kaontinao manokana manokana ary mivezivezy ao amin'ny fizarana "ny kaontiko". Avy eo, tsidiho ny safidy "manaiky ny blôgy" ary mameno ny antsipiriany rehetra. Raha tsia, tsindrio ny bokotra "manolotra" ary ankafizo ny bokotra DoFollow vaovao vao noforonina. Dia izay!
Ny toerana faharoa tsara indrindra hambarako aminao dia ny Codecademy. Mandehana any amin'ny tranokalany ary apetraho ao amin'ny rejisitra ny kaontinao vaovao. Raha vantany vao vita izany dia mandehana any amin'ny mombamomba anao manokana ary apetraho amin'ny tranonkalanao na blôginao. Izany no izy - ianao dia manana backlink tsara avy any PR-7 miaraka amin'ny DoFollow.
Avy eo dia misy backlink avy amin'i Granta. Araka ny efa nolazaiko, dia manana kaonty vaovao ao amin'ny tranonkalany ianao, mandamina ny dinganina feno ary ankafizo ny backlink PR-7 DoFollow
Azonao atao ny manara-maso akaiky ny fandehan-javatra mitovy amin'izany mba hahazoana ny kalitao DoFollow any amin'ny tranonkala manaraka. Aza misalasala mamantatra toerana vaovao tsara mifandray amin'ny, toy ny OneTab, Copyright, Alltop, Indulgy, Eventful, Ted. Amin'izany, aza hadino ny mitsidika ny kaontinao manokana ao amin'ny Google Plus, ary koa mametraka ny lahatsoranao amin'ny zaridaina mba hahazoana rindrankajy hafa manana DoFollow Source .